बुधबार, अप्रिल 28, 2010 शनिबार, जून १,, २०१। स्कट हार्डडिग्री
हामी सबैलाई थाहा छ, ईमेल मार्केटिंगले काम गर्दछ त्यसैले म तपाईंलाई बोर गर्नेछैन यो सूचना। यसको सट्टा, हामी एक ईमेल मार्केटिंग परामर्शदाता के हो हेरौं र उनीहरूले तपाईंको लागि के गर्न सक्दछन्।
ईमेल मार्केटिंग परामर्शदाताले सामान्यतया तीन प्रकारका लिन्छन्, एक ईमेल मार्केटिंग एजेन्सी, एक फ्रीलांसर, वा एक ईमेल सेवा प्रदायक (ESP) वा परम्परागत एजेन्सी मा घर मा कर्मचारी; सबैमा सीप र अनुभव छन् जुन प्रभावी ईमेल मार्केटिंग रणनीतिहरू विकास गर्न विशिष्ट हुन्छन्। यद्यपि तिनीहरूको कोर योग्यता र सेवा प्रस्ताव फरक फरक हुन्छ।
त्यसोभए के तपाईंलाई ईमेल मार्केटिंग परामर्शदाता चाहिन्छ? यदि हो भने, कस्तो प्रकारको? आफैलाई निम्न प्रश्नहरू सोध्नुहोस्।
के मेरो मेलि solution समाधान मेरो लागि सही छ?
के मेरो ईएसपी वा इन-हाउस समाधानहरूले मलाई आवश्यक सबै सुविधाहरू प्रदान गर्दछ? के म ती सुविधाहरू प्रयोग गर्दैछु जुन मैले भुक्तान गरिरहेको छु? ME प्रयोग गर्न सजिलो छ? के मेरो लागत मेरो लागतको साथ इनपुटमा छ?
म के पठाउँदै छु?
मैले म्याप गरेको के छु? जस्तै स्वागत ईमेलहरू, न्यूजलेटरहरू, त्यागिएका अर्डरहरू, प्रचारहरू, र पुन: सक्रियकरण ईमेलहरू? म के छुरहेको छु कहाँ ईमेल संचार श्रृंखला ब्रेकडाउन गर्छ?
म कहिले पत्र पठाउँछु?
के मैले ईमेलहरू पठाउन मेरो प्राप्तकर्ताको कार्यहरूमा आधारित जानकारी प्रयोग गर्नुपर्दछ, जस्तै सेतो कागज डाउनलोड वा कार्ट त्याग? मिति-संचालित ईमेलहरूको बारेमा के हो, जस्तै छुट्टी केवल खरीददारहरू वा वर्षगाँठहरू। मेरो न्यूजलेटरहरूको लागि मेरो सम्पादकीय क्यालेन्डर के हो? के म एड-हक प्रचारात्मक ईमेलहरूको ट्र्याक गर्दैछु?
मेरो व्यापार नियम के हो?
के मैले निर्णय गर्नुको कारण केमा सन्देश पठाइन्छ? सन्देश समर्थन गर्न के डाटा आवश्यक छ? के डाटा आयात प्रक्रिया म्यानुअल वा स्वचालित हुनुपर्छ? जब यी सर्तहरू पूरा हुन्छन् तब के सामग्री पठाइन्छ? नाम र विषय लाइनबाट मेरो योजना के हो? के मैले यो मिश्रण गर्नु पर्छ? मैले के र कहिले जाँच्नु पर्छ?
मेरो लक्ष्य के हो?
के मैले लक्ष्यहरू स्थापना गरेको छु, जस्तो कि डाउनलोडको संख्या, बिक्री, दर्ताहरू? मेरो सूची बढाउन म के गर्ने योजना गर्दैछु? एट्रेसन कम गर्न म के गर्न सक्छु?
मेरो रिपोर्टिंग आवश्यकताहरू के हुन्?
के मैले मेरो परिणामहरू सुधार गर्न र मेरो केस प्रमाणित गर्न केवल क्लिकहरू र ओपनहरू भन्दा बढी हेर्न आवश्यक छ? के मलाई सीआरएम र वेबसाइट को रूपमा बाहिरी डाटामा मेरो ट्याप चाहिन्छ? विश्लेषण उपकरणहरू स्थापना र मेरो सफलता मेट्रिक्स ट्र्याक गर्न?
ईमेल मार्केटिंग धेरै विपणकहरु को लागी एक महत्वपूर्ण प्रयास हो, तर प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण र समय खपत हुन सक्छ। ईमेल मार्केटिंग परामर्शदाता वा एजेन्सीले तपाईंलाई लक्ष्यहरू पूरा गर्न मद्दत गर्दछ जब तपाईं आफ्नो समयलाई तपाईंको व्यवसायको अन्य पक्षहरू सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुहुन्छ।
केवल अन्तर्दृष्टि मात्रै चाहिन्छ? एक ईमेल-केन्द्रित एजेन्सीले पनि समर्थन सेवाहरू प्रदान गर्न सक्दछ, साथ साथै निर्देशन, जुन सुरूवात गर्न र बलियो ईमेल मार्केटि program प्रोग्रामलाई समर्थन गर्न आवश्यक हुन्छ; पढ्नु कसरी एक ईमेल मार्केटिंग एजेन्सी किराया थप जान्न।
टैग: ईमेल परामर्शदाताइमेल मार्केटिङईमेल मार्केटिंग परामर्शदाता